04.04.2012 Yakatumirwa na: Art Sense
Kurongedza kwounyanzvi, Kushongedzwa kwemadziro
Sarudza kushongedza kwako.
Kana iwe uchida chimwe chinhu chakawanda kunze kwechinyakare uye chinotaridzika, funga izvi mazano akakodzera akasiyana masitayiti emukati.
A mashoma art mazano ekushongedza madziro.
Art, decor, pfungwa, the wall, mazano epamba, zvemukati dhizaini, fenicha, zvemukati mazano, dhizaini mazano, imba yemazuva ano, kurongedza mazano, hunyanzvi mazano
Pfungwa dzinonakidza dzebindu
Tinokuunzira imwe inonakidza uye mitsva mazano egadheni kuti ashumire sekufemerwa ...
Zvinyoro, zvine rudo uye zvinoyevedza! Iyo isiri nyore uye inodhura nzira yekushongedza dutu riri nyore ...
Inotapira uye inosiyanisa buttery maswiti
Iko kutsvaga kwekusiyanisa inzira yakajairika mukugadzirwa kwehunyanzvi kweunyanzvi hwekunyora ...
Iko kushongedza mubindu nemavara emarata kana masiponji ementi
Inenge chero chinhu cheimba chinogona kushandiswa kushongedzwa kwebindu, asi kugadzira yako ...
Artistic kushamisika keke "Rainbow"
Kushamisika keke kugadzira kunowanzo kuve kwakaoma keke iyo inoda ruzivo uye ...
The Great Japan Minda - Kairaku-en
Kairaku-en - "Bindu kunakidzwa pamwe chete" (chiJapan - 偕 楽 園) ingano ...
Gadzira arch yemaruva mubindu
Iyo arch yemaruva mubindu inogona kugadzirwa nemunhu wese ane chido uye kukurudzira kuti agadzire ...
Pfungwa dzepakutanga dzemukoti
Heano mamwe akanaka uye epakutanga mazano eiyo nursery. Iwo mapurojekiti emukati ari ...